Uzoba nzima umdlalo we-Arrows ne Sundowns | News24
Uzoba nzima umdlalo we-Arrows ne Sundowns
PHOTO: goldenarrowsfc.comUmqeqeshi we-Golden Arrows uClinton Larsen.
KULEZINSUKU amathemba aKwaZulu- Natal kwiNedbank Cup nakwi ligi ye-PSL iLamontville Golden Arrows,kulezinsuku ithandwa yimona ngubani kulesifundazwe.
Phela Abafana Bes’thende benze ezibukwayo ngesikhathi bedla iPlatinum Stars emdlalweni weNedbank Cup okade usePrincess Magogo Stadium kwaMashu.
Phela i-Arrows idle lezivakashi zaseNorth West emdlalweni okade usiphuzisa izinwele uqala waze wayophela.
Ngalokhukunqoba sekuchaza ukuthi leliqembu selizodlala amasemifayinela nokuwumzulwiswano owandulela owamanqamu. Kuzothi ngaloLwesihlanu lwakusasa i-Arrows ibhekane nezingqungqulu zebhola zaseMzansi iMamelodi Sundowns kusihlwa ngo 8pm.
Phela wonke amathimu ePSL avele aveve amadolo angazi ukuthi kufanele ahlanganise ini nani. Phela Amasandawana ngesizini edlule adla umhlanganiso kwiligi kanye nakwiCaf Cup.
Umqeqeshi weArrows uthi abadlali bakhe badlala kakhulu kwi-Nedbank kodwa kuyofanele baqaphele koweligi ngoba iSundowns izothanda ukuhlupha ikakhulukazi ngoba sekuya ngasekusongweni kweligi.
“IMamelodi Sundowns ingenye yamakilabhu amakhulu eMzansi futhi-ke akufanele nje sikholwe noma sizikhohlise ngoba phela iqiniso lithi bangoshampeni beligi kanye ne-Africa yonkana. Sizodlala ngokuzimisela futhi siyabahlonipha kodwa phela kuzofanele kukhunjulwe ukuthi sizobe zidlalela ekhaya, kanti nathi asithandi ukuphoxa abalandeli bethu,”kusho uLarsen.
Kanti ikilabhu eyinkathazo kulezinsuku yasePitoli iSuperSport United izophinda ihlangane iphinde ihlukane neKaizer Chiefs njengoba bezobe bebhekene futhi koweligi.
Phela iUnited ibhabaze iKhosi kabuhlungu yabakhipha nakwiNedbank Cup nalapho ekade sekushaywa amaphenathi.
Lomdlalo walezingwenya uzobe ubanjelwe eMbombela Stadium ngaloMgqibelo esiyakuwona.
Kanti-ke isiyonke yePSL
imidlalo ihlelwe kanje:
28 April Highlands Park v Wits 8pm Makhulong Stadium
28 April Golden Arrows v Mamelodi Sundowns 8pm Princess Magogo Stadium
29 April Free State Stars v Polokwane City 3pm Goble Park
29 April SuperSport United v Kaizer Chiefs 6pm Mbombela Stadium
29 April Orlando Pirates v Chippa United 8:15pm Orlando Stadium
30 April Ajax Cape Town v Platinum Stars 3pm Cape Town Stadium
30 April Baroka FC v Bloemfontein Celtic Peter Mokaba Stadium
Sizodlala ngokuzimisela futhi siyabahlonipha kodwa phela kuzofanele kukhunjulwe ukuthi sizobe zidlalela ekhaya, kanti nathi asithandi ukuphoxa abalandeli bethu.